सबै समयका Most सबैभन्दा चलाख लोगोहरू - Print Peppermint
सबै समयका Most सबैभन्दा चलाख लोगो
नोभेम्बर 28, 2019 | डिजाइन, उद्यमी, लोगो डिजाइन
यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको लागि एक अद्वितीय ब्रान्ड लोगो सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर स्टम्प भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने, प्रेरणा पाउनको लागि सबैभन्दा चतुर लोगो मध्ये of जाँच गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको ब्राण्ड परिचय बिक्री बढाउनको लागि प्रमुख कारक हो?
सबै पछि, सिग्नेचर कलर एक्लो हुन सक्छ आफ्नो मान्यता बढाउनुहोस् 80०% सम्म। यो ग्राहकहरुका लागी एक उत्तम तरीका हो तपाईका प्रतिस्पर्धीहरुबाट तपाइँलाई पहिचान गर्नका लागि।
यदि तपाईं आफ्नो कम्पनीमा चलाख लोगो राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। तपाईं एक को रूप मा समाप्त गर्न चाहनुहुन्न अनुवादमा ब्राण्ड हरायो। यहाँ केहि क्लेभरेस्ट लोगोहरू छन् जसले तपाईंलाई सहि कम्पनी लोगो डिजाइन छनौट गर्न मद्दत गर्दछ:
यो कम्पनी एक हो अग्रणी ईकामर्स वेबसाइटहरू संसारमा। अहिले, यो तिनीहरूको उद्योग मा ग्लोबल बजार शेयरको market१% मा विराजमान छ। २०२१ सम्ममा यसले सम्पूर्ण ईकामर्स मार्केटको आधा भाग लिनेछ।
अनलाइन रिटेलरले सामानको विस्तृत सर्राई बिक्री गर्दछ। तपाईंले लोगोको चलाखीता एरमा "A" र "Z" मा देखाउँदै देख्न सक्नुहुन्छ। यसको थप रूपमा, तपाईले ग्राहकहरूलाई अपेक्षा गरेको सन्तुष्टिको मुस्कानको रूपमा लोगो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरूले VAIO (भिजुअल अडियो इंटेलिजेंट आयोजक) पछाडि लुकेका सन्देशलाई हराउनेछन्। लोगोको "VA" साइन तरंग जस्तो देखिन्छ जबकि IO संख्या १ र like जस्तो देखिन्छ। पहिलेको एनालगको लागि आधारभूत संकेत प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि उत्तरपश्चात तिनीहरूको डिजिटल बाइनरी संकेत समकक्ष हो।
यसको मतलब यो हो कि लोगो प्राविधिक विकासको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले एनालग उपकरणबाट डिजिटलमा ट्रान्जिसन प्रतिनिधित्व गर्दछ।
ठूला Toblerones सबै उमेरका मानिसका लागि महान उपहार हुन्। के अधिकांश व्यक्तिले गुमाउँछन् कि त्यहाँ लोगोमा एक जनावर लुकेको छ। म्याटरहोर्न माउन्टेनमा भालु पर्वतारोही छ, र यो एक अचम्म मोडको साथ शीर्ष लोगोहरू मध्ये एक बनाउँदछ।
यस भालुको पछाडि कारण यो हो कि यो बर्न शहरबाट उत्पादन गरिएको हो। यस स्विस शहरको हतियारको कोटमा भालु छ।
लुकेको चतुरताको साथ अर्को उत्तम लोगो डिजाइन, यो पहिलो नजरमा नम्र देखिन्छ। के अधिकांश व्यक्तिले हराउँदछन् ती "E" र "X" बीचको तीर हो। यो अन्यथा साधारण लोगोमा एक सफा थप हो, र यसको डिजाइनरले भने कि यो केवल एक लुकेको बोनस हो।
यस अनलाइन विश्वकोशको लोगो प्राय: सबै भन्दा मानिसहरू लाई चिन्न सकिन्छ। यद्यपि अधिकांश व्यक्तिहरू जिगस टुक्राहरूबाट बनाइएको अधूरा ग्लोबको पछाडि सही अर्थ हराउँछन्। प्रत्येक टुक्रा संसारमा लेखन को बिभिन्न प्रणाली बाट glyphs छ।
यसको पछाडिको अर्थ पर्याप्त सरल छ: यसले विकिपेडियाको बहुभाषिकतालाई जनाउँछ।
आज चलाख लोगो कसरी बनाउने सिक्नुहोस्!
सबै भन्दा राम्रो लोगोहरू बनाउन यो गाह्रो छ। तपाईले धेरै समय र प्रयास लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ यो आउँदो बर्षको लागि सम्झनागार बन्नको लागि। लोगोहरू तपाईको कम्पनीको पहिचान हुन् - यदि यो बिर्सिने योग्य छ भने, तपाईको कम्पनी अस्पष्ट हुनेछ।
यी चलाख लोगोहरूले प्रेरणाको रूपमा सेवा दिन सक्छ यदि तपाईं एक दिन तपाईंको व्यवसायको लागि नाम बनाउन चाहानुहुन्छ।
के तपाइँ तपाइँको कम्पनी को लागी कस्टम लोगो डिजाइन को आवश्यकता छ? आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई अझ राम्रो, अधिक अद्वितीय लोगो प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं जसमा तपाईं गर्व गर्न सक्नुहुन्छ।
Logo लोगो डिजाइनको मनोविज्ञान पछाडि सिद्धान्तहरू
Stand तरीकाले ब्यावसायिक कार्डहरू बनाउने →